IApartment eMłynarz, Uroczysko Połomja
Żarki, śląskie, Poland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStaszek
Indlu ekhululekileyo yabantu aba-4 ukuya kwe-7 ebekwe kumgangatho we-2 wesakhiwo, esiyinxalenye yendawo yangasese enkulu (i-36 ha) yangaphambili ye-mill settlement "Tenderowizna", ebekwe kwi-Jurassic Landscape Park. Pow. I-80m2 ifulethi, kubandakanya igumbi lokulala eliphindwe kathathu, indawo enkulu evulekileyo enekhitshi, igumbi lokutyela, indawo yokuhlala, isofa esongwayo (abantu aba-2) kunye nebhedi ephindwe kabini eyahlulwe ngumkhusane, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye neshawari. ITerrace (44 m2) ejonge uhlaza kunye namachibi. Kukho umnyango ozimeleyo ovela ngaphandle ukuya kwindlu.
Indlu - ifudunyezwe yi-gas central ukufudumeza - inendawo eqhelekileyo kunye nekhitshi, indawo yokudlela kunye nendawo yokuhlala (57m2 iyonke), igumbi lokuhlambela le-5m2, igumbi lokulala le-15m2, i-niche enebhedi (3m2). Indawo yokutyela kunye neyokuhlala ixhotyiswe ngetafile enkulu yokutya (abantu abayi-6-8), i-TV ye-intshi engama-43, i-sofa egobileyo (150x200cm), izihlalo ezi-2, itafile yekofu, idesksi enesihlalo, iishelufu zezihlangu. iimpahla /, ibhokisi bagi, esipilini, ityesi ngenxa ngelinen. Kwikona yendawo ekwabelwana ngayo ihlukaniswe yikhethini, kukho ibhedi eyongezelelweyo (145 x 190 cm). Ikhitshi ixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba, ifriji, i-dishwasher, i-oven microwave, i-4-burner induction hob yombane, umenzi wekofu, ijagi yombane, izixhobo ezigcweleyo ezineembiza, iipani, izitya kunye ne-cutlery. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini i-180 x 200 cm kunye nokulala kwabantu aba-2, iitafile kunye nezibane zebhedi, ibhedi eyongezelelweyo (90 x 200 cm), i-wardrobe yeminyango emibini kunye neengcango ze-sliding, amashalofu. Inethi yeengcongconi efestileni. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe nge-cubicle yokuhlamba 75x115cm, indlu yangasese, isitya sokuhlambela, iikhabhinethi, isibuko, isethi yeetawuli, isomisi seenwele. Kwi-terrace, itafile, izihlalo ezi-6, i-parasol, i-grill. Kukho i-wardrobe ye-wardrobe phambi komnyango wendlu. Sibonelela iindwendwe ngesicoci sevacuum. I-Wi-Fi yasimahla kwigumbi lokuhlala.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 iisofa eziyi-
4.93 ·Izimvo eziyi-29
4.93 out of 5 stars from 29 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-29
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi29
Ejikeleze indlu, kukho ipaki, ihlathi, i-meadow, amachibi, umlambo, i-waterfall, izakhiwo zefama kunye nendlu yabanini kwindawo yangasese. Ifulethi liyinxalenye yendawo yokuhlala ebekwe kwindawo ezolileyo, kude nommandla, kwaye kwangaxeshanye kuphela iimitha ezingama-350 ukusuka kwindlela yebhayisekile edibanisa neendlela zebhayisekile zeJurassic. Ukusuka apha, ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2.5 ukuya kumbindi we-Żarki, indawo enomtsalane kubakhenkethi, umz. imyuziyam yezobugcisa zakudala kwindawo yokusila endala, imiboniso e-Żary, amangcwaba amaJuda - amangcwaba amadala amaJuda, ukwenziwa kwelollipop, kunye nabanye) , ngaphantsi kwe-3.5 km engcwele of Our Lady of Leśniów Patroness Iintsapho, 10 km ukuya inqaba e Mirów kunye Bobolice, akayi kunambathisa kakhulu ngakumbi na Złoty Potok (trout afreshi lunghekerile, ipaka intambo, iindawo zokuqubha, Krasiński komkhulu, zokutyela ezininzi ), kwiikhilomitha ezimbalwa neendlela zokugwencela, amaqhosha ebhutsi amahashe kunye neefama zeCARP kwi Helenówka (3.5 km) kunye nezinye iindawo ezikufuphi i Krakow-Częstochowa Jura. Iikhilomitha ezimbini ukuya kwivenkile yesaphulelo, iimitha ezingama-350 ukuya kwivenkile yegrosari, indawo yokubhaka kunye ne-ayisikrimu.
Kwindawo yethu, kukho ii-gazebos ezi-2, ii-hammocks epakini, indawo yomlilo, iibhayisekile, itafile ye-ping-pong (ehlotyeni), i-badminton / i-volleyball net, iindlela zehlathi kwihlathi labucala, ujingi ngasechibini. , ibrayi kunye yokudlalela mini kubantwana jinga, ibhokisi yesanti, zeslayidi ehlotyeni echibini lokuqubha. Sikwanazo neekati ezi-2, inja (egcinwe entanjeni), ihoko yenkukhu kunye namaqanda amatsha e-eco asuka kwizikhukukazi zethu ezinemilenze eluhlaza. Kunokwenzeka ukuba u-odole isidlo kwimikhosi. Ngesicelo, sinokunika ibhedi enebhedi, isihlalo somntwana, ibhafu. Ipaki yemoto yasimahla phantsi kwekhusi.
Kwesi sakhiwo kukho igumbi lethu lesibini: IApartament Przy Stawach, kunye neMłyn Tenderowizna ekhaya leeholide (zombini ziyafumaneka kwiAirBnB), nakwizakhiwo, kwizakhiwo ezahlukileyo emva kweshedi, kufutshane, iApartament Pod Klonem kunye nePark Apartment (zombini ziyafumaneka. on AirBnB, esingethwe Aleksander).
Umbuki zindwendwe ngu- Staszek
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 17:00 - 22:00